Fijoroana vavolombelona | MNVJ
Ministera Nahita ny Voninahitry Jesosy
Adiresy Ministera Nvj
TORIO AMIN’IZAY TSY MAHALALA JESOSY
Asa 5:20 Mandehana, ka mitsangàna, ary mitoria amin’ny vahoaka eo an-kianjan’ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. ASA 5
Nataoko hijoroana vavolombelona hanambarana aminao fa velona ny Jesosy niantso ahy sy niantso anao inty tranokala inty
Noho ny fitarihan’ny Fanahy Masina dia hinoako fa ho lasa lavitra isika eo amin’ny fiarahana mitory izany fitiavan’ny Jesosy izany. Maro tokoa mantsy ireo olona mbola tsy mahafantatra marina Azy. Ary mino aho fa hampahery sy hampadroso anao bebe kokoa amin’ny fanarahan-dia ny Tompo ny famakina hatramin’ny farany inty fijoroana vavolombelona inty.
MANDEHA AMIN’NY FINOANA
I / TSY MAINTSY AZONAO ANTOKA FA NATERAKA INDRAY IANAO
Taona 1996, nanao fitoriana ny Filazantsara goavana ingahy Billy Graham. Saika nalefa mivantana maneran-tany izany. Noraisin’ny fiangonana Fjkm an-tànana tamin’io ny fikarakarana azy teto Madagasikara. Nentanina ny fiangonana fjkm rehetra samy handefa ny mpivavaka ao aminy hanatrika izany teny amin’ny stade municipale Mahamasina. Nisy ny fiarahan’ny Chorale rehetra nihira hanafàna ny fotoana. Niangavy ny mpiandraikitra ny sampana chorale (takriva) teto aminay mba samy handeha fa zava-dehibe loatra ny fanatrehana izany. Tsy dia nampiraika ahy loatra izany fa nandeha ny maro dia mba lasa aho. Nanomboka ny hira fiderana, nanomboka voasarika ny fanahiko, tsikaritro sahady ny tsy fitovian’ny fanaonay teny ambony tamboho fahiny sy ny hira fiderana ho an’i Tompo. Nanomboka ny toriteny, ny tena nahafaly ahy dia ny mijery ny fihetsika ataon’ity rangahy mpandika teny, mafana fo mitsamboaboatra manerana ny trano. Tampoka teo dia toa hitako nanondro ahy ingahy Graham mpitory Teny tetsy amin’ny fahitalavitra lehibe, toa ohatry ny izaho irery sisa no iresahany. Notanisainy ny fiainako, notanisainy ny fanaoko, vaotsikerany ny momba ahy manontolo, toa fantany daholo ny ato anatiko. Tadidiko sady tsy afaka ato an-tsaiko intsony ny fehezan-teny iray nambarany fa « izao rehetra izao mety mandaho sy mety simba sy lo, hoy izy, fa misy Olona iray tena Tia anao sady tsy mba madaho anao ary manomana fiainana tsy mba mety levona mandrakizay ho anao ».
MANIRY TE HAHALALA MARINA AN’ANDRIAMANITRA AHO
Te hahafantra ny tena hery sy fahefana ananan’izany Andriamanitra izany aho, hatraiza marina ny heriny, misy marina ve Andriamanitra ?
Nanomboka mangetaheta aho, tena mahavita manafaka ny olana goavana entiko sy ny fiainan-tokantranonay mikorontan-dava ve ny Tompo ?
Nanomboka nanao Antso izy ka nanainga ny olona hanatona eny aloha ka hanolotra ny fiainany ho an’i Jesosy. Tsy nahalala menatra intsony aho,izay tena matahotra olona. Tsy tadidiko intsony hoe misy olona an’arivony mijery ahy teo, ny toerana misy anay eny amin’ny farany ambony saingy lasa aho ary izaho no voalohany indrindra nanoloana ilay fahitalavitra lehibe, nigogogogo nitomany toy ny zazakely aho tsy fantatro izay antony, ny fantatro dia resy aho, resin’ny Tompo aho.
Nanomboka teo dia nisy antoka vaovao tonga tato anatiko, nanjary maivana ny entako ; azoko antoka fa olon’afaka aho, ny zava-dehibe indrindra dia nahazo Namana aho ary ilay Namana tsara fanahy sady be fitiavana ary tena tia ahy indrindra dia Jesosy Kristy izany. Ilay namoy ny ainy noho ny fitiavany ahy. Ary hatramin’izao hanoratako izao dia miresaka amiko Izy ary manoro làlana ahy. Andriamanitra tena be fitiavana ny Tompo ry havana ka na dia ilay mpanota, sady mpaniratsira toa ahy aza dia nekeny ho tena namany. Ary izao no tena mahagaga Izy no efa nitady ahy sy anao hatrin’ny ela fa tsy isika akory no nitady Azy aloha.
TSY MAINTSY MANOLOTENA IANAO
Tokony tsy maintsy azonao antoka fa nateraka indray ianao.Tamin’ny andro nanaovana batisa antsika dia voasoratra ho isan’ny fianakaviana kristiana isika. Nisy fanoloran-tena, ny nitondranao ny tenanao sy ny zanakao ho an’i JESOSY. Matetika zary lasa fombafomba fotsiny sisa ho antsika ny fanoloran-tena toy ireny saingy ny an’i Jesosy rehefa izay dia izay. Betsaka no efa tonga zanak »Andriamanitra fa tena tsy azony antoka fa efa an’ny Tompo izy.
Izay vao fantatro fa ilaina ny fanoloran-tena ho an’ny Tompo isan’andro. Arakaraky ny fanavaozana ny fanoloran-tenantsika no mampitombo ny antoka ato anatintsika ka hitomboan’ny finoantsika. Vao maraina alohan’ny hanomboako ny asa aman-draharahako hatolotro indray ho an’i Jesosy ny foko sy ny androko manontolo. Rehefa misy ny finoana dia mahay manao ny zavatra rehatra.
Lioka 7:9 Marka 10:52 Ary hoy Jesosy taminy: Mandehana hianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin’izay ny masony, ka nanaraka an’i Jesosy teny an-dàlana izy. MARKA 10
Miantso anao ny TOMPO anio : « tena efa azonao antoka ve fa nateraka indray ianao ? ny làlana ahafantaranao izany dia ny fanoloranao ny tenanao.
Nanatona an’i Jesosy aho nentiko nanatona azy niaraka daholo ny fianako rehetra, ny fahazaran-dratsiko, ny toetrako, ny fomba ratsiko rehetra tàty aoriana lavitra be aza vao afaka ny fahazaran-dratsiko sasany ary misy aza mbola atolotro an’i Jesosy mandraka izao, saingy ny azoko antoka dia efa namela ny heloko i Jesosy. Efa vitany teo ambonin’ny Hazofijaliana taona maro lasa izay ny famonjena ahy. Indrandray isika tsy sahy manatona an’i Jesosy satria matahotra fa be fahotana. Nisy rahalahiko iray tsy mety mandeha nivavaka intsony satria rehefa nanontaniako dia nambarany fa izy ve, hono, mbola ho raisin’i Jesosy ihany fa be loatra ny otany, hoy aho mantsy azy « tia an’ise foana Jesosy » Izy rehafa tia dia tia ny Azy hatramin’ny farany. Ary aoka ho tadidintsika fa tsy ianao no mitady ny Tompo fa Izy no nitady anao ary efa nitady anao hatrin’ny ela.
Izay ny nandraisako an’i Jesosy fa manomboka eto ambany kosa dia hotantaraiko anao ny fiainako mandeha amin’ny finoana
NY TANJOKO DIA NY HANANANAO FIRAISANA TANTERAKA AMIN’ILAY TOMPONTSIKA ARY IZAY HO TANTARAIKO AMINAO ETO DIA HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA IRERY HANAMBARAKO AMINAO FA TSY MIOVA NY JESOSINTSIKA ARY MAHERY SY MAHAGAGA IZY.
Moa misy zava-mahagaga izay tsy hain’i Jehovah Andriamanitra va ?